Posted by pandora at 2:24 AM
ဒီ ရသ စာတမ်းလေးကောင်းတယ်…ဖတ်သူတွေကြိုက်သလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခံစားဖို့ကျွန်တော့်အမြင်နဲ့ ဝင်မရှုပ်တော့ပါဘူး..ကျေးဇူး
မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုသာ ကျန်သော သေတ္တာတစ်လုံးသည်
ဘယ်လောက် စွန့်စားမှုကြီးသလဲ ဆိုတာ သူတို့မသိကြ။
ကိုယ့်ဝန်းကျင်ကို..ပြီေးတာ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြည့်နေရသလိုပဲ။
မပန်... ဘ၀မှာ အရာရာတိုင်း လူတိုင်း သူတို့လုပ်သင့်တာ လုပ်နေကြသည် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးကို ကြိုက်တယ် ။
ပုံရိပ် ကတော့ ပေါက်စီနဲ့ ကော်ဖီ ကို ကြိုက်တယ်။ :D
အလကား နောက်တာ။ ဖတ်လို့ ကောင်း တယ် မပန်။ မပန်က အရေးအသား ကောင်းပ။
ဒီပို့ က အတွေး အခေါ် အရေးအသား တချို့ က ကျွန်တော့် ကို ဖမ်းစား တွေးတောနေစေခဲ့ တယ်။
ကြိုက်တယ် … ပန်ပန် …
ဒီ့ထက်ပိုပြီး မပြောတတ်တော့ဘူး …
ရည်ရွယ်ချက်မရှိရင် ဘလောက်မရေးရတော့ဘူးလား။ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဘလောက်တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံမိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုး မရှိရင်တောင်မှ ပို့စ် တစ်ခုတစ်ခုစီမှာ ပြောချင်တာလေးတွေ ရှိနေမှာတော့ အသေအချာပါ။ ဥပမာ - ဒီပို့စ်မှာဆို ဟာသကဲတယ်၊ ဖြန့်ထွက်တွေးခြင်းသဘော ဆောင်တယ်၊ ဘလောက်ဂါများသာ နားလည်နိုင်တာတွေလည်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘလောက်ဂါဆိုတာ ဘလောက်ဘာသာစကား ပြောတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်လာတော့မလားလို့တောင် ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
ဒီပို့စ်အတွက်ကတော့ ကွန်မန့်ရေးကြသူများကို တစ်ဦးချင်းပြန်စရာ စကားမရှိ ဖြစ်နေတယ်.. ရှင်းပြစရာလည်း မရှိတော့ ကြိုက်သလို ယူဆနိုင်ပါတယ်..
ထင်မြင်ချက်တွေ ဒီ့ထက် အသေးစိတ် ပြောနိုင်ရင်လည်း ပိုလို့ ကျေးဇူးတင်ရဦးမှာပါ..
ကိုရဲမွန်ပြောတဲ့.. ဘလောက်ဘာသာစကား ဆိုတာတော့ သဘောကျသား..
ဒီ အသုံးအနှုန်းလေးကနေ ကဗျာတစ်ခု အဖြစ် ကူးပြောင်းကောင်း ပြောင်းသွားနိုင်တယ်..
ဟုတ်တယ် ကိုမင်းရေ…ဒါကြောင့် ဘလောက်စကားသင် နေရတယ် လေ…တော်ကြာ ခေတ်နောက်ကျသွားမှာ စိုးလို့… :P
အရမ်းအရမ်းကို ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ...နေရာပေါင်းစုံကို ရောက်သွားသလိုပဲ..
ပုံဆွဲတော်လိုက်တာလို့ ချီးကျူးရတဲ့ မပန် logic လေးက လူကို ငိုင်သွားတာပဲ။ ဘဝထဲက မိုင်တိုင်တွေအတွက် ရုန်းကန်ပြီး နှလုံးသားထဲက မှတ်တိုင်တွေအတွက် blog ရေးနေကြတာလားလို့ တွေးမိသွားတယ်။
ဒီလိုလေ.. ကျွန်တော် ပြောတာက ဘာအကြောင်းအရာတွေလဲ. နည်းပညာလား. . အချစ်လား.. ဘ၀လား. နိုင်ငံရေး..ဘာသာရေး စသဖြင့်ပေါ့။”
I think I found someone who shares the same view with me...
Sometimes we think we are not contributing anything or don't intend to educate, persuade or promote anything to anyone; however, indeed we are contributing at least something to somebody. :D :D
I printed this post :)
ှုIdentity က ရှေ့ကလား ဘယ်အရာက ရှေ့ကလဲ..
စိတ်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်တဲ့ ရသတစ်ခုကို အခိုင်အမာ ရရှိစေအောင် ရေးနိုင်တဲ့ မပန်ဒိုရာကို လေးစား ချီးကျူးပါတယ်ခင်ဗျာ.. နောင်ကိုလည်း မကြာခဏ ဒါမျိုးစာတွေ ဖတ်ပါရစေခင်ဗျာ..
ထပ်ပြီး မှတ်ချက်ရေးသွားကြတဲ့ ပီတိ၊ မင်းမင်း၊ clef၊ မလေးနဲ့ ကိုမျက်လုံးတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
မလေး နဲ့ကိုမျက် You almost read me.
အစ်မကြီး ခင် ရေ.. မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ.. အတုယူရအောင်တော့ မဟုတ်လောက်သေးပါဘူး နော်.. ဟဲ..
စိတ်ထဲ မသိတသိဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေကို ချပြနိုင်တယ်။
မပန် ဘာတွေပေးထားသလဲ ဆိုတာထက် ကျနော် တစ်ခုမက ရလိုက်တယ်ဆိုတာက အသေအချာပဲ-
ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်ကရေးခဲ့တာပဲဗျ. ကျနော်က ဘလော့ကို စာဝင်ဖတ်ရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ကောင်.ကျနော်က ၀ထ္ထုတိုလေးလို့ မြင်တယ် ဖတ်ရတာနောက်ကျနေသပေါ့ ရသစာတန်းဘာညာခေါ်ချင်ရာ
မြင်ချင်သလို ခေါ်ကြမှာပေါ့ဗျာ.ခင်ဗျားက လက်မမှန်တဲ့
သူလို့ ခင်ဗျားကို ခင်ဗျားပစ်ပစ်ခါခါပြောတယ်.ကျနော်က
လက်စုံတဲ့သူလို့ခုမြင်တယ် တခုခြင်းစီကို သေသေသပ်သပ် ခင်ဗျားခင်းကျင်းသွားနိုင်တယ်လို့မြင်သွားပါတယ်.ခင်ဗျားကြိုက်နှစ်သက်ရာတွေကို ခုလိုဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ။